PolitikamPamonoana ny Teny Malagasy Ataon'ny Fitondrana Malagasy ankehitriny
2007-09-26 @ 08:36 in Kolontsaina
Tsy honohono na tsahotsaho na fanahiana fa tena miditra amin’ny famonoana ny teny malagasy tokoa ny fitondrana malagasy amin’izao fotoana izao. Ny gazety midi madagasikara tamin’ny sabotsy 22 septambra no nanambara fa novorian’ny minisitry ny fitsarana sady mpitahiny ny tombo-kasem-panjakana ny tonian-dahatsoratry ny gazety mivoaka isan’andro vitsivitsy teto Madagasikara.
Nambaran-dramatoa minisitra tamin’izany ary fa hamoaka didy hitsivolana ny fanjakana. Io didy hitsivolana io (dekre) dia hametra ny gazety hany mahazo ny tolotra avy amin’ny fanjakana rehefa mamoaka tolotr’asa na fanambarana avy amin’ny governemanta na fanambarana ofisialy rehetra avy amin’ny fanjakana.
Voalaza ao anatin’ny famerana ary fa tsy maintsy mahavoaka isan-gazety 10.000 isan’andro io gazety io ary tsy maintsy mpamoaka teny ofisialy roa fahafahakeliny amin’ny teny ofisialy telo ananan’I Madagasikara io gazety io.
Hendratra aho raha vao naheno izany. Iza moa no tsy mahalala fa ny gazety hany miteny malagasy no tsy tafiditra amin’izany, nefa ireo gazety ireo no be mpividy indrindra isan’andro? Ny olan’ireo gazety miteny malagasy ireo anefa dia ny tsy mba ahazoany dokambarotra avy amin’ny orinasa rehetra mihitsy. Ny ankamaroan’ny dokambarotra rehetra manko dia amin’ny teny frantsay avokoa. Efa masaka ao an-tsain’ny orinasa ihany koa fa izay mpividy gazety amin’ny teny malagasy dia tsy mba mahatakatra afa-tsy iny gazaety iny ka vola very maina raha mitonantonana manao dikambarotra any.
Dia ny fanjakana eritreretina mba hanampy ireo gazety teny malagasy ireo indray ity no vao maika mampivoitra izany fomba fisainana manao valalan’amboa ny teny malagasy izany. Nantenaina hanery ny hafa aza izy mba ho ny gazety mpiteny malagasy ihany no amoahana izay tian’ny fanjakana avoaka izay, zavatra aloa vola manko izany mba ho fanohanana ilay teny malagasy, nefa dia nivandravandra fotsiny aho sisa. Farafaharatsiny mba ho ohatra halain’ny rehetra tahaka nefa dia nanara-driandrano tahaka ny deba rehetra ihany. Tena adala aho izany miezaka mandika teny isan’andro ilay sehatra iraisam-pirenena Global Voices noho ny fitiavana ny teny malagasy fotsiny. Adala aho izany raha eto amin’ny vavahadiben’ny blaogy.com no mamoaka lahatsoratra ihany koa na dia misy mahafinaritra aza any an-kafa any.
Dia tsaroako tato anatiko indray ny tononkalo navoakako efa folo taona mahery lasa izay ary avoakako ho hitanareo rehetra anio:
Ny azy sy ny anao
Dia noraisinao ho adidy
Ny vidin’ny azy sy ny anao
Ny azy no dradrainy
Ho tena ilaina
Hampivelatra ny saina
Ny anao ny misoko
Ny azy no sahaza
Satria tsy misy ny toa azy
Sady io no fampiasa
Ny anao tsy naranty
Mbola velona efa maty
Satria fiteny lany daty
Ny azy no isasarana
Raha itoeran’ny fitiavana
Ny anao hatramin’izao
Tsy tiana hihavao
Mandiso indray ny safidy natao
Ny azy no nomena
Eto amin’ny firenena
Ho mariky ny fahaleovantena
Ny anao ampandeferina
Ny iny tokony aherina
No hany averimberina
Ny azy anefa no kendreny
Mba ho fiteny
Na dia efa antitra aza
Ny anao no tian-kavela
Ho rakitry ny ela
Ka nony toy ny rova may
Vao milelalela ny tahaka izay
Ny azy mihamahery
Ny anao mihavery
Ny azy izay tratra
Ny anao mihamahantra
Jentilisa, nosoratana tamin’ny 19 desambra 1995
Ny fanafintohinana momba ilay emeraoda milanja atsasa-taonina teto Madagasikara hita tany La Réunion izao no maresaka teto amin’ny tanàna androany.